Xubno ka tirsan Congress-ka oo ku baaqay cunaqabateyn | KEYDMEDIA ONLINE
WASHINGTON, USA - Waxaa isa soo taraya hadallada kulul ee ka imaanaya waddamada, Ururada iyo shaqsiyaadka gacanta ku haya malafyada siyaasadeed ee Soomaaliya, War saxaafadeed ka soo baxay Xildhibaanno ka tirsan Aqalka Congaress-ka ayaa lagu dalbadan in cunaqabateyn la saaro kuwa caqabadda ku ah xasillonida Soomaaliya.
Xunbo ka tirsan Aqalka Congaress-ka Maraykanka ayaa ku taliyay in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka USA la leedahay Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, waxayna soo jeediyeen in cunaqabateyn la saaro sakhsiyaadka caqaqabadda ku ah geedi socodka nabadda.
Gregory W. Meeks iyo Michael McCaul, oo ka mid ah Xildhibaannada Aqalka Hose ee Congaress-ka, ayaa walaac xooggan ka muujiyay, muddo kordhinta Golaha Shacabku u shameeyeen, Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo.
Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeenka Aqalka Hoose ee Congaress-ka Guddigiisa Arirmaha Dibedda, Waxa ay sheegeen in muddo kordhintu ay wiiqeyso hannaanka Fadaraalka, dhaawacna u geysaneyso dimqoraadiyadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
War Saxaafadeed-kaan, ka soo baxay Gregory W. Meeks iyo Michael McCaul, ayaa lagu xusay, muhiimadda ay leedahay in Dalka Mareykanka uu dib u eego xiriirka uu la leeyahay Dowladda Fadaraalka iyo taageerada kala duwan ee uu siiyo.